Tachycardia amin'ny ankizy
Reny Ny fahasalaman'ny zaza
Raha hitanao fa mafy fo ao amin'ny zanakao izay nipoitra taorian'ny fampiasana ara-batana mahery fihetsika, ny adin-tsaina marefo, ny tazo mahery, tokony ho fantatrao raha manana tachycardia ny zaza, na ny antony dia amin'ny zavatra hafa. Ny teny hoe "tachycardia" amin'ny teny grika dia midika hoe "haingana" sy "fo", izany hoe miezaka haingana kokoa ny fo. Ny fifindran'ny fo ao amin'ny ankizy dia samy hafa amin'ny vanim-potoana. Matetika ny ankizy dia tsy mahatsapa fo mahomby. Mbola malemy ny fony, ary raha manomboka miasa haingana izy, dia afaka mitaraina momba ny fahalemena, ny fitsaboana, ny tinnitus ny ankizy. Ity toe-javatra ity dia antsoina hoe tachycardia, izany dia fihenam-bidy haingana dia haingana amin'ny hozatry ny fo.
Misy karazana tachycardia marobe amin'ny ankizy:
1. Amin'ny tachycardia sinus, dia mitombo ny isan'ny fihenan-tsakafo ao amin'ny otrikaretina sinus. Ny antony an'io karazana tachycardia io dia mety ho fanerena henjana ara-batana na ny fisian'ny aretina hafa amin'ny rafi-pandrefesana ao amin'ny zaza. Sinus tachycardia dia mety ho ara-batana sy malemy. Ny sinis tachycardia dia mifindra amin'ny fisian'ny zavamaniry vascular vascular mandritra ny vanim-potoan'ny fitomboan'ny zaza. Ny tachycardia momba ny pathological dia mampivelatra amin'ny loto ara-boajanahin'ny fo. Ny tachycardia sinuscardia amin'ny fo ao amin'ny ankizy dia matetika manomboka sy mandalo tsikelikely - izany no mampiavaka azy. Ny fahatsapana ny tachycardia amin'ny ankizy dia tsy hita na miseho amin'ny fiakaran'ny hafanam-po. Raha fongana ny antony, dia mandalo tsy misy andalana ny sinis tachycardia.
2. Tako-kardia paroxysmaly amin'ny zaza dia tampoka amin'ny taham-paharetana mankany amin'ny 180-200 bits amin'ny minitra, izay mety hipoitra tampoka, ary mety hiverina amin'ny ara-dalàna ny pulses. Matahotra mafy ny ankizy mandritra ny fanafihana, fanaintainana ao an-kibony, fohy fofona, cyanose, sweaty, fahalemena mety hiseho. Azo atao tsinontsinona ny tachycardia Nadzheludochkovuyu: mamintina ny tsiranoka amin'ny lohalika, sarotra ny manenjika, mihazona ny fofona, manindry ny aotobony, miteraka ranomafana. Ny fitsaboana ny tachycardia toy izany amin'ny zaza dia ny fampiasana glycoside kardiac ary (aorian'ny fiafaran'ilay fanafihana) - fanohanana fanafody.
Ny tachycardia, paroxysmal, dia manana endrika roa:
supraventricular (mitranga rehefa miova ny fanitsiana ny asan'ny fo);
Ny ventricular (mitranga amin'ny zaza dia tsy dia fahita firy, saingy manana fanombatombana tsy dia tsara, indrindra amin'ny zaza vao teraka).
3. Misy tachycardia mitaiza koa , izay afaka maneho ny tenany ao amin'ny zaza amin'ny fihenan'ny tsindry, fanaintainana eo amin'ny tratra. Matetika, mandritra ny fanafihana iray, ny zaza dia very tsinahy na voataona. Ny antony mahatonga ny tachycardia mitranga toy izany dia ny fanavakavahana amin'ny fony amin'ny zaza. Ny fitsaboana ny tachycardia mitaiza amin'ny ankizy dia ny manova ny fomba fiainan'ny marary: mila manara-maso amim-pitandremana ny fitondrana ny andrin'ny ankizy ianao, hiaro azy amin'ny faneriterena ara-batana sy ara-pihetseham-po, ara-batana, tokony ho sakafo mahasalama amin'ny mineraly sy vitamina.
Ny karazam-pon'ny tachycardia amin'ny zaza, izay tsy misy fitsaboana, dia mety hitarika ho amin'ny tsy fahombiazan'ny fo amin'ny hoavy. Noho izany, ny ray aman-dreny dia tokony hitandrina tsara momba ny aretin'ny zaza iray, ary raha misy fitarainana dia mitadiava fanampiana ara-pitsaboana avy hatrany.
Ny tsy firaharahan'ny urine amin'ny ankizy
Lugol Spray ho an'ny ankizy
Mpivadi-pofona avy amin'ny kohaka ho an'ny ankizy
Nahoana ny ankizy no mihantona eo amin'ny lohany?
Influenza Ny soritr'aretina amin'ny ankizy
Ny urinalysis amin'ny ankizy - transcript
Ny alèin'ny sakafo ao amin'ny zaza - ny antony sy ny fitsaboana izay tokony ho fantatry ny reny rehetra
Bura amin'ny glycerine ho an'ny zaza vao teraka
Fiziminutka ho an'ny ankizy
Ny dite miteraka amin'ny ankizy - ny filaminana sy ny toetran'ny fitomboana
Ny tahan'ny fahavoazan'ny zaza dia fitsipika araka ny taona
Mandeha ao amin'ny orona amin'ny ankizy avy amin'ny 0
Ohatrinona ny fijanonan'ny ARVI amin'ny zaza?
Ny atin-kafatra amin'ny zaza
Zava-mahagaga 10 momba ny ankizy teraka tamin'ny Septambra!
LED Ceiling Chandelier ho an'ny trano
Ahoana no hamaritra ny faharetan'ny fitondrana vohoka isam-bolana?
Ny karazan-kôkôma misimisy indrindra ho an'ny voamadinika
Sarin'ny takelaka misy sora-baventy
Inona no nofinofin'ny polisy?
Ratsy ny mifoka sigara ho an'ny zatovo
Cystitis amin'ny alika
Ny fitsaboana amin'ny rà biôkrika momba ny fitondrana vohoka
Ny pantyhose oversize - ireo modely lamaody indrindra sy ny fomba tokony hitondrany azy amin'ity vanim-potoana ity?
Loko acryl amin'ny rano
Ny akanjon'ny vehivavy mifofofofo
Sakafo ho an'ny zatovo
Ahoana ny Sal Salmon - ny fomba tsara indrindra hahazoana sakafo mahavelona
Tattoo whale - lanjany
Trondro nasiana siramamy
Rahoviana no hita ny kibo mandritra ny fitondrana vohoka?
Ny antony mahatonga ny vehivavy
Ahoana no fomba hananganana rose avy amin'ny voa?